MMEMME MAKA NKESA WIFI SITE NA LAPTỌỌPỤ - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Laptọọpụ bụ ngwaọrụ dị ike nke na-enye ndị ọrụ aka ịnagide ọtụtụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ nwere oghere W-Fi wuru nke nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụghị naanị iji nweta mgbaàmà, kamakwa ịlaghachi. Na nke a, laptọọpụ gị nwere ike kesaa Ịntanetị na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ikesa Wi-Fi site na laptọọpụ bụ ihe bara uru nke pụrụ inyere aka na ọnọdụ ebe Internet chọrọ inye ọ bụghị naanị kọmputa, kamakwa ngwaọrụ ndị ọzọ (mbadamba, smartphones, laptọọpụ, wdg). Ọnọdụ a na - ebili ma ọ bụrụ na kọmpụta ejiri ịntanetị ma ọ bụ eriri USB.
Atụmatụ free n'efu maka ikesa Wi-Fi na laptọọpụ. Emere ihe omume a site na interface dị mfe nke ga-adị mfe ịghọta ọbụna maka ndị ọrụ na-enweghị ihe ọmụma nke asụsụ Bekee.
Usoro ihe omume ahụ na-arụ ọrụ ya ma na-enye gị ohere ịmalite mmalite ebe ọ bụla mgbe ịmalite Windows.
Ihe omumu: Otu esi ekesa Wi-Fi na MyPublicWiFi
Ihe omume dị mfe ma rụọ ọrụ iji kesaa Wai Fai site na mma interface.
Ihe omume ahụ bụ shareware; Ihe eji eme ihe bụ n'efu, mana maka ihe ndị dị ka ịgbasa netwọk ikuku na iji ihe Ngwaọrụ na-enweghị Wi-Fi, ị ga-akwụ ụgwọ.
Ngwaọrụ dị mfe maka ikesa netwọk ikuku na ngwaọrụ ndị ọzọ, nke a maara na ike ịbelata ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọtara na ebe ị ga-esi nweta ya, na-enyekwa gị ohere ịchọta ozi gbasara ọbịbịa na-apụ apụ, ikuku na nloghachi nzaghachi na oge ọrụ ọrụ ikuku.
Gbanwee onye nhazi ngwa ngwa
A obere ngwanrọ nwere obere window arụ ọrụ.
Usoro ihe omume ahụ nwere ntọala kachasị, ị nwere ike ịtọ nbanye na paswọọdụ, ọnọdụ na mmalite na ngosipụta nke ngwaọrụ ejikọrọ. Ma nke a bụ ihe kachasị mma - usoro ahụ anaghị ebugharị ya na ihe ndị na-adịghị mkpa, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mfe maka iji ụbọchị eme ihe.
Ibudata Gbanwee Kọmputa Nhazi
Onye nhazi ngwaghari ozo
A obere ihe omume nke na-ekesa Wi-Fi, nke, dị ka ọ bụrụ na nke Switch Virtual Router, nwere nke kacha nta nke ntọala.
Iji malite, naanị ịkwesịrị ịtọ nbanye na paswọọdụ maka netwọk ikuku, họrọ ụdị njikọ Ịntanetị, ihe omume ahụ dị njikere ịrụ ọrụ. Ozugbo ngwaọrụ jikọtara na mmemme ahụ, a ga-egosipụta ha na mpaghara ala nke usoro ihe omume ahụ.
Download Kwadoro Nchọgharị Manager
MaryFi bụ obere ọrụ na interface dị mfe na nkwado maka asụsụ Russian, nke a na-ekesa kpamkpam n'efu.
Uru a na-enye gị ohere ịmepụta ohere ọhụụ nke ọma, n'emebughị oge gị na ntọala ndị na-adịghị mkpa.
Onye na-emeputa ihe ntụgharị ngwa ngwa
Ngwaọrụ Router Plus bụ ọrụ bara uru nke na-adịghị achọ ka echichi na kọmputa.
Iji rụọ ọrụ na usoro ihe omume ahụ, ọ dị mkpa ka ị na-agba ọsọ faịlụ EXE dị na archive, ma dee aha njirimara na paswọọdụ maka ịchọpụta nke netwọk gị site na ngwaọrụ. Ozugbo ị pịa bọtịnụ "OK," ihe omume ahụ ga-amalite ọrụ ya.
WiFi Ime Anwansi
Ngwaọrụ ọzọ na-anaghị achọ nkwụnye na kọmputa. Naanị ịkwesịrị ịkwaga faịlụ mmemme ahụ gaa ebe ọ bụla dị na kọmputa gị ma malite ya ozugbo.
Site n'usoro ihe omume ahụ, enwere ike ịbanye nbanye na paswọọdụ, dee ụdị njikọ Ịntanetị, yana gosipụta ndepụta nke ngwaọrụ ejikọrọ. Ihe omume ahụ enwekwaghị ọrụ. Mana uru, n'adịghị ka mmemme dị iche iche, a kwadebere ya na ọmarịcha interface ọhụrụ nke a na-etinye na-arụ ọrụ.
Download Magic WiFi
Onye ọ bụla n'ime ihe omume ahụ a na-enye na-arụ ọrụ ya na - arụ ọrụ kachasị mkpa - ihe ebumpụta ụwa nke ọhụụ. Site n'akụkụ gị, ọ ka na-ekpebi ihe omume ị ga-enye.